Farmaajo iyo Rooble oo ciidan la dhex dhigayo | KEYDMEDIA ONLINE
19 January 2022 Qeylo-dhaantii doorashada oo dib u billaabatay
Farmaajo iyo Rooble oo ciidan la dhex dhigayo
Farmaajo oo ka quustay soo laabasho, horana carqalad ugu ahaa hirgalinta doorashooyinka ayaa dhamaadkii sanadkii tagay soo kordhiyay qalalaaso amni, waxaase Xafiiskiisa la hor dhigi doonaa AMISOM amran oo dhaqdhaqaaqiisa xakameeya.
MUQDISHO, Soomaaloya – Madaxweynayaasha Maamullada ee ku daaban Farmaajo, sida Laftagareen, Qoorqoor iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Cumar Finish, ayaa hor istaagay qorshe uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ku doonayay inuu kula wareego hoggaanka amniga dalka, kadib dhacdadii 27-kii December.
Is hor istaaggaas, wuxuu sababay kala qeybsanaan, Golaha Wadatashiga ayana laba gabi, qadiyaddaas ku kala koray, shirka ayaana qarka u fuulay in uu burburo, ka hor inta RW Rooble uusan dalban in qodobka la furfuro, dooddanada hore loo sii wado.
War-murtiyeedka shirka oo si weyn isha loogu hayo, ayaa la sugayaa in farwaaweyn lagu muujiyo in AMISOM, la kala dhex dhigo xaafiisyada Farmaajo iyo Rooble, isla-markaana la dejiyo qoryaha isku sii jeeda ee labada xaafiis saaran.
Sida aan hore u baahinnay, qaar ka mid ah Madaxda Maamullada ayaa soo bandhigay in guud ahaan amniga Villa Soomaaliya, lagu wareejiyo ciidanka Sector One ee AMISOM, kuwaas oo qabilsan ilaalada Madxda DF iyo xarumaha muhiimka ah.
Soo jeedintaas, waxaa sidoo kale ku jirtay in Madaxtoyada dhexdeeda laga saaro askarta Soomaaliya ee Koofiya-cas loo yaqaan, kuwaas oo kala qeybsamay, qodobkaan, waxa ay dhinacyadu hore uga muujiyeen isku soo dhawansho, hayeeshee, wuxuu u muuqdaa in gadaal looga gurtay.
Sida ay xogo hoose ku heshay KEYDMEDIA ONLINE, Dawlad goballeedyadu, si weyn uguma kala gaddisna in la cambaareyo dhacdadii 27-kii December, waxaana war-murtiyeedka shirka lagu canbaareyn doonaa Af-ganbigii dhicisoobay.
Muranka ka taagan Guddiyada Doorashada sida; Guddiga heer Federaal iyo kan Xallinta Khilaafaadka, ayaa laga heshiiyay, waxaa meesha laga saaray lacagtii Ergada laga qaadi jiray, halka 60 maalin gudahood loo qabtay in la soo af-meero doorashada Golaha Shacabka.
Sida laga yeelayo kuraasta la boobay ee muranku ka taagan yahay, xogtoodu wali ma cadda, waxaana la filayaa in Goluhu ku dhawaaqi doono in Taliyayaasha Ciidanku ka amar qaataan Golaha Wasiirrada.
Haddii xogtan, soo gaartay KON, dhaqan gasho oo Madaxtooyada Soomaaliya iyo labadii Xaafiis ee ugu muhiimsaned dalka la kala dhex dhigo ciidan ajanabi ah si labada ilaalo loo kala badbaadiyo, waxa ay noqoneysaa u laabashada 2007 iyo in Farmaajo burburiyay is-aaninaaddii dowladnimo ee 10-kii sano ee asaga ka horreysay la soo yabyabayay.